Taxane Mercury Joogtaynta High UPS hayayaashiibixisaa hayayaashii / Tower foomka factor in ay ku habboon deegaanka kala duwan. Fiican ee baahida ilaalinta awood-cufnaanta dhexdhexaad ah, Inkastoo ay raad is haysta, UPS this daro baakad batteriga gudaha oo laga heli karaa via guddi hore jeegagga dayactirka iyo bedelka aan ka saareen UPS ka soo kordhaya hayayaashii ay. Guddi bandhigay LCD waxay si fudud loo wareejiyay kartaa adigoo riixaya badhanka si ay ugu habboonaato format rakibo, vertical taagan ama ka walacsan dhigeysa Buur. Ka sokow, shaqaalaha IT si fiican u maamuli kartaa qalabka ka barashada hartay macluumaad waqtiga gurmad via bandhigay LCD.
Iyada oo design double-diinta runta ah, taxane Mercury bixiyaa difaac awood iyo guud ahaan qalabka aad xasaasi ah. Waxaa aqbali karo danab talooyinka guud ee deegaanka adag. Waa difaac fiican ee aad server qaali ah, iyo ka qaateen.
2. saarka la ruxruxo Culumida daahir ah
Iyada oo wax soo saarka saafi ruxruxo Culumida, damaanad waafaqid ee dhammaan noocyada kala duwan ee xamuulka. Its ilaalinta awoodda fiican ee codsiyada boosaska badan sida shabakadaha, isgaarsiinta iyo codsiyada kale mission-muhiimka ah.
taxane Mercury weli ku siin kara awood deggan qalabka ku xiran hoos jawi awood aan degganayn.
awood factor 5. Output 0.8
Marka la barbar dhigo ee UPS online in suuqa ee hadda, Mercury taxane UPS bixisaa factorup awoodda wax soo saarka si fiican u 0,8. Waxay bixisaa qaab sare iyo effciency codsiyada muhiim ah.
6.ECO hawlgalka hab badbaado tamarta
7. Power Emergency Off (Epo) Function
8. USB + RS232 + RJ45 + SNMP isgaadhsiinta kala duwan oo 1-3K lagu daydo
• Humanized bandhigay guddiga iyo turnable screen LCD
guddi Front la screen LCD, bandhigay dareen by habka of tirooyin iyo naqshadeynta iwm, screen LCD si xor ah isku shaandheyn karaa, iyo bandhigay LCD waxay noqon kartaa joogto ah labada rakibidda nooca Tower ama hayayaashii Jaha UPS nooca.
• hayayaashii / Tower Nooca Design
hab The rakibidda hayayaasha iyo ilaa munaaraddii kor ups noqon kartaa Beddelashada loo aabo yeelin, The Barkhad for hayayaasha iyo stents ee ups munaaraddii waa Heerka random loo baahan yahay, si sahlan tahay doorashada by users.
• UPS ayaa loogu xidhi karaa kombiyuutarka via USB ama Rs232 interface. Sidaas waxa lagu xaqiijin karaa LAN socodka nooc hal ama qaar badan oo UPS, waxa ay sidoo kale la socon kartaa baaritaan kale oo ku xiran kombiyuutarka via LAN.
Joogtaynta High UPS hayayaashii
100% ~ 110%, digniin la maqli karo
110% ~ 130%, UPS oo xiray 60 ilbiriqsi ee hab batari ama kala iibsiga la dhaafayo marka utility waa caadi
> 130%, UPS hoos isla markiiba xiray at hab batari ama kala iibsiga si ay hab isku tallaalidda markii utility waa caadi
4 saacadood kabsado awoodda 90%
1.0 A (ugu badnaan.)
Hayayaashii Frequency Mercury Taxanaha High UPS 1KVA-10KVA
Previous: 10-20KVA UPS hayayaashii Frequency High (3: 1) Next:20KVA-210KVA qaybsan UPS
6-10KVA UPS hayayaashii Frequency Sare